I-Sapphire Suite 1Bed/1Bath - I-Airbnb
I-Sapphire Suite 1Bed/1Bath
Sarasota, Florida, i-United States
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Lazarus
U-Lazarus Ungumbungazi ovelele
Ikamelo elihle elinokunethezeka. Ukuxuba okumnandi kokuhlobisa kwase-Spain nokwesimanje endaweni yokuhlala esanda kulungiswa enazo zonke izidingo ezifana ne-wifi, i-patio yangaphandle kanye nendawo yakho yokupaka yamahhala.
Ikamelo litholakala EMIZUZWINI ENGU- kude nazo zonke izindawo ezithandwayo zase-Sarasota! Ingaphansi komgwaqo ukusuka e-Jungle Gardens. Ukuhambahamba imizuzu engu-10 ukuya e-The Ringling Museum. Ukushayela imizuzu engu-10 ukuya e-Downtown, ukushayela imizuzu engu-15 ukuya kokubili e-Siesta Key ne-St. Armand 's Circle. Ayikwazanga ukutholakala kahle!
Woza uphumule endaweni enokuthula ekamelweni lethu lezivakashi elilungiswe ngokuphelele eliphakathi kwenye yezindawo ezizungeze amadolobha amakhulu nezikhangayo kuzo zonke izindawo zase-Florida!
I-Sapphire Suite inikeza konke ukunethezeka kwekamelo elikhulu, lokuphumula kuyilapho futhi iseduze nazo zonke izindawo ezishisayo zase-Sarasota okuhlanganisa i-Jungle Gardens, i-Selby Gardens, i-Marina Jacks, i-Lido Key, i-Siesta Key, ne-Downtown.
I-Sapphire Suite inendawo esesitayeleni egcwele ukulungisa okugcwele kuyo yonke indawo nendawo yokungena. Indawo iklanyelwe ngokukhethekile ukunethezeka nokuzola kwakho. Le ndawo iklanyelwe ukushaywa wumoya okukahle kakhulu ukuze isivakashi esisodwa noma ezimbili zize ziphumule kwelinye lamadolobha amahle kunawo wonke e-U.S.
Uma usufikile uzozithola ufuna ukuhambahamba ku-Bay Shore Rd engokomlando lapho ungazicabanga khona ubuyela emuva emlandweni ngaphansi kwezihlahla ze-okhi zasendulo zase-Sarasota njengoba zigcwalisa izigodlo ezivulekile zomgwaqo. Akukho lutho olwaziwa kakhulu kune-Ca d 'Zan Mansion edumile, engaphakathi kwe-Ringling Museum edumile ngokulinganayo. Noma mhlawumbe ungase ufise ukuvakashela i-Sarasota Bay ngakolunye uhlangothi lwe-Bay Shore futhi ubuke enye yezindawo zokushona kwelanga ezihlaba umxhwele kakhulu emhlabeni wethu.
Ikamelo lethu elithokomele liyiyunithi eyodwa yekhaya elinamayunithi amabili. Ihlukaniswe ngokomzimba nendlu eyinhloko, okwenza izivakashi zethu ziphelele futhi zibe nobumfihlo ngokuphelele eholidini lazo.
Izivakashi zizoba negumbi lazo lokuphumula, indlu yokugezela, nekamelo lokulala kanye nendawo yokupaka kanye ne-patio yangaphandle yangasese.
I-TV ye-Roku iphinde inikezwe eza ne-Sling TV, i-Netflix, i-Hulu, ne-Amazon Prime Video. Konke lokhu okwakho
Imishini yasekhishini efana ne-microwave, i-toaster, nefriji zizonikezwa. Sicela usebenzise okuqukethwe ezinhliziyweni zenu!
Zonke izici namasevisi e-Sapphire Suite azosetshenziswa nguwe kuphela.
I-TV ene- I-Amazon Prime Video, Disney+, I-Netflix
5.0 · 60 okushiwo abanye
Ikamelo litholakala e-Sapphire Shores ethulile yase-Sarasota. Enye yezindawo ezizungeze amadolobha amakhulu kunazo zonke kulesi sifunda, ikhaya lezingadi ezidumile zasehlathini kanye ne-Ringling Museum. Indawo ezungeze idolobha elikhulu iseduze ne-Ringling College of Arts.
Uzozithola uphoqelekile ukuba uhambe endaweni ezungeze idolobha elikhulu futhi ubuke izihlahla ezinhle nezihlahla zase-Sapphire Shores. Uhamba e-Bay Shore Rd uzozithola use-Sarasota Bay ohlangothini olulodwa noma e-Ringling Museum ngakolunye uhlangothi. Sikumema ukuthi uhlole kokubili!
I-Bay Shore Rd inezindawo eziningi ezidume kakhulu zase-Florida kuhlanganise ne-Ca d 'Zan Mansion, ikhaya lasebusika lomnikazi wesekisi waseMelika, uJohn Ringling nomkakhe, u-Mable.
Izingadi zasehlathini ezidumile zihamba ngemizuzu emibili ukusuka ekamelweni lethu. Ukuba nezindawo eziningi zokuheha ezifana nemibukiso yezinyoni nokudla okufuthwayo kwe-flamingo. Ngemva kokuvakashela i-Bay, hlola le ndawo ethandekayo!
ULazarus Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Sarasota namaphethelo